ICosmos inyusele umdlali osemncane esikwatini esikhulu – Sivubela intuthuko Newspaper
ICosmos inyusele umdlali osemncane esikwatini esikhulu
Umphathi weJomo Cosmos uJomo Sono onyusele umfana omncane esigabeni esikhulu
UMPHATHI weqembu leJomo Cosmos u Jomo Sono ukhuphulele umdlali oneminyaka eyi-15 ubudala esikwatini esikhulu saleli qembu. Lo mdlali okunguZuko Gxabuza odlala esiswini uzakhele igama emva kokudlala kahle ezinhlakeni zentsha zaleli qembu.
UGxabuza ubegijima esikwatini seminyaka engaphansi kwengu-17 ngaphansi komqhudelwano iFuture Champions International Soccer Tournament ngenyanga uNdasa, ebe eqale ukudlala eseneminyaka engaphansi kweyi-13.
““Yebo sesimsayinisile uGxabuza esuka kwizinkulisa, kanti siyathembisa ukumenza abencono kulesikhathi esifunshane,” kusho uSono .
USono odlale imidlalo yokuhlungela ukungena esigabeni se-Absa premierhip usekhiqize abadlali abaningi eminyakeni eyedlule okuhlanganisa izinkakha zeBafana Bafana uMark Fish, Sizwe Motaung, Philemon Masinga kanye noHelman Mkhalele.